Ya mere, mgbe ọtụtụ deliberation i akpatre kpebiri na ọ bụ oge ahia na gị ochie iPhone na kwalite ka a ọhụrụ version. Magburu onwe oke, ma ọ pụtara na ị pụrụ nanị na-eje ije na gị kacha nso dealer, aka ya n'elu gị ochie iPhone, akwụ ego na-eme n'ụlọ a ngwaọrụ ọhụrụ?
Baba-o! Dị nnọọ echiche niile data na ị echekwara na gị ochie gadget. E nwere oge mgbe ọ bụ ezigbo ihe ị nwere na-a enyi na ị nyere ya ihe niile. Gịnị na-eme ma ọ bụrụ na ihe a nile mwute ozi na-agwụ elu ihe ọjọọ aka?
Iji zọpụta onwe gị nsogbu, ọ na-atụ aro ka ị hichapụ ihe niile gị data si gị ochie iPhone tupu nganga ezikwa zuo nke ọhụrụ nlereanya. Tupu anyị na-agwa gị otú ị hichapụ gị data, i kwesịrị Mbido a paswọọdụ dị ka iwu site iPhone emeputa, Apple.
Lee ndị nzọụkwụ mkpa ka i soro.
Soro Ntọala> passcode ụzọ na gị ochie iPhone ngwaọrụ.
Kpatụ Turn passcode na bọtịnụ.
Ngwaọrụ ga-akpali gị ịbanye a passcode. Ị ga-mkpa re-abanye ya maka nkwenye nzube. Ma si otú, gị passcode ugbu a nyeere.
N'ahịrị ikpeazụ nke na peeji nke i kwesịrị ịchọta nkwupụta Data nchebe na-nyeere.
Ozugbo a mere, ị nwere ike ịga n'ihu na-ihichapu niile data. Bụ ihe ndị a dị mkpa ka a mere iji mezuo nke a.
Mee a ndabere
Tupu ị ehichapụkwa anya mmiri gị niile data, hụ na gị na iPhone-kụziri elu nke mere na ị na-adịghị ida ọ bụla data mgbe na-agbanwe agbanwe na ngwaọrụ gị.
Soro Ntọala> iCloud> Nchekwa & ndabere ụzọ.
Ị ga-ahụ a mgba ọkụ akara iCloud ndabere nke gị mkpa na-atụgharị on. A ozugbo ga-apụta ịdọ aka ná ntị gị na ekwentị ga-akpaghị aka na ina kwadoo gị na kọmputa. Enweta na dịkwa mma na n'ihu.
Ozugbo iCloud ndabere na-agba ọsọ, enweta na ndabere Ugbu a. Nke a ga-amalite data ndabere usoro si gị iPhone na iCloud.
Ọ bụrụ na ị na-eji iCloud ndabere, ọ bụla ntuziaka deletions ị na-eme ga-enweta wepụrụ si kwadoo data. Ya mere hụ na ị adịghị ewepụ photos, kọntaktị, ma ọ bụ ndị ọzọ dị oké mkpa ọmụma ma ọ bụrụ na ị na-eme otú ụma.
Ọzọ ọzọ ka iCloud bụ iTunes na nke a bụ aka karịsịa n'ihi na ndị na-arụ ọrụ na a iji nwayọọ njikọ Ịntanetị. Na iTunes, unu onwe unu ga-esi na ndabere gị ngwa ọdịnala na niile metụtara ọdịnaya. Ọzọkwa, e nwere na-akparaghị ókè ohere n'adịghị na iCloud ebe ị ga-akwụ ke 5 GB nke free nchekwa ego n'anya jupụtara elu.
Mepee iTunes na họrọ iPhone button n'elu nri n'akụkụ aka.
N'okpuru akpaghị aka Back Up nhọrọ họrọ encrypt iPhone ndabere. Mee a paswọọdụ maka iTunes ndabere n'ihi na ụfọdụ mwute ozi nwere ike ẹdude ke ndepụta.
Ọ bụrụ na ị na-akwado data site na iji akwụkwọ ntuziaka ndabere mode, pịa Iji aka ndabere na weghachite wee họrọ Back Up Ugbu a nhọrọ na-amalite usoro. Nke a bụ a na-ewe oge usoro wee jide n'aka na i nwere ihe nkeji na-emefu dị ka mkpa.
Ozugbo niile dị oké mkpa data si ndabere ngwa e kwadoo, ị ga-kpaliri banyere akwado gị ịzụrụ. Nke a nnoo Akwadoo elu arụnyere ngwa tinyere ha data. Niile i nwere ime bụ gị banye Apple ID maka usoro iji nweta underway.
Ugbu a, na gị niile data-kụziri elu, ị nwere ike ịga n'ihu na ihichapụ gị data.
Pịa na Ntọala> Ozuruọnụ> Tọgharia.
A ga-enwe ọtụtụ nhọrọ maka resetting zoputara data. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ihichapụ ihe niile, họrọ ihichapu niile ọdịnaya na Ntọala.
A ga-enwe a ozugbo maka ịbanye gị passcode. Nke a ga-esochi elu site na a ịdọ aka ná ntị na ndị niile gị mgbasa ozi na data faịlụ ga ugbu a ga-ehichapụ. Enweta na ihichapu bọtịnụ na ma ufodu.
Ọ bụrụ na ndị Chọta My iPhone Services na-nyeere na gị iPhone, ọ ga-akpali gị na Apple ID paswọọdụ. Ọ dị mma na ihe a ọnọdụ dị ka dị irè mgbochi na-ezu ohi ezu.
Ozugbo i nwere ọhụrụ gị iPhone, na kwadoo data nwere ike weghachiri eweghachi si iCloud ma ọ bụ iTunes nchekwa oghere.
Ezie na nke a na-abụkarị ụzọ ọtụtụ ndị mmadụ na ndabere ha iPhone data, o nwere ọnụ ọgụgụ nke ọghọm. Nke mbụ niile, usoro bụ nnọọ ogologo na ya mere nnọọ na-ewe oge, karịsịa mgbe ị na-arụ ọrụ na a ngwa ngwa njikọ Ịntanetị. Ọzọkwa, e nwere ọtụtụ ihe ndị okwuntughe n'ihi na ị na-echeta. Ọ bụrụ na ị na-echefu otu n'ime ha, ị ga-enwe iji tọgharịa ihe niile na Malitegharịa ekwentị site ọkọ.
Mgbe ahụ e nwere na nke ehichapụ faịlụ. N'ime ogologo oge n'oge nke ị na-eji gị iPhone, ọ bụ eleghị anya na ị na-ehichapu ụfọdụ ego nke data. Nke a data adịghị ehichapụ na-adịgide adịgide; N'eziokwu, e nwere ụdị dị iche iche nke software si n'ebe ike ga-eji iji weghachite ozi a. Nke a doo gị na a nnyapade ọnọdụ dị ka nzuzo gị bụ nchegbu.
Na-adịgide adịgide ihichapu gị iPhone iji Wondershare SafeEraser
A odi mfe na ndị ọzọ viable ọzọ ga-eji na Wondershare SafeEraser ngwa n'ihi na erasing data gị iPhone. Ọ nwere ọnụ ọgụgụ nke pụrụ iche atụmatụ na nke ị nwere ike ihichapu gị ugbu a, onwe nakwa dị ka na mbụ ehichapụ data.
Ị nwere ike ibudata ya na ebe a maka PC gị ma ọ bụ Mac.
Wondershare SafeEraser bụ otu n'ime ihe ndị kasị ala ngwa i nwere ike ịhụ maka data nhichapụ na gị iPhone. Download na wụnye ya ozugbo na-itukwasi maka ndụ gị na a ga-ọ dịghị ihe iyi egwu nke data na-ezu ohi na-eme na gị iPhone agwụcha elu na ihe ọjọọ aka.
Ka anyị ngwa ngwa a lee anya na nzọụkwụ abuana ke ihichapụ ma ọ bụ erasing gị iPhone na-adịgide adịgide iji Wondershare SafeEraser.
Nzọụkwụ 1: Ozugbo ị ibudatara na arụnyere na SafeEraser ngwa, ẹkedori na ya ma họrọ nhọrọ nke ihichapu niile Data site na isi interface.
Nzọụkwụ 2: Pịnye na okwu ahụ 'ihichapụ' gosi ya na unu mkpebi na-amalite usoro nke ihicha ihe iPhone.
Nzọụkwụ 3: Ugbu a, ị nanị nwere-na na na ka ngwa ime ya ọrụ. Ị ga-ahụ a ihuenyo dị ka nyere n'okpuru na-egosi na ọganihu nke erasing usoro.
Nzọụkwụ 4: Wondershare SafeEraser mara mma nke ukwuu ejiri dum usoro na-adịgide adịgide nhichapụ nke gị iPhone na ya. Ozugbo usoro zuru ezu, ọ ga-egosi na na a ozi egosipụta na ya na ihuenyo dị ka e gosiri na foto a nyere n'okpuru.
> Resource> ihichapu> Olee Ị ichicha ihe iPhone-adịgide adịgide?